एक रातको होइन, एक पटकको १५ सय, जाने भए हाम्रैमा जाने हो’
March 24, 2022 AdminLeaveaComment on एक रातको होइन, एक पटकको १५ सय, जाने भए हाम्रैमा जाने हो’
जनाको हातमा गाढा नीलो रङको ब्याग झुण्डिरहेको थियो। उनीहरू त्यहाँका पुरुषहरूसँग गफिन थाले। एक युवतीले ब्यागबाट चुरोट झिकेर सल्काइन्। केही नजिक पुगेपछि उनीहरूको कुरा सुनियो। उनीहरू रात कहाँ बिताउने भन्नेबारे कुराकानी गरिरहेका थिए।
ती पुरुषसँग सोध्दा उनले यौ’ ‘नक’र्मी तेस्रोलिंगीसँग रेट नमिलेको बताए। ‘मलाई जाऊँ–जाऊँ त लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, रेटै मिलेन। १५ सय रे। त्यति धेरै तिरेर यस्तासँग के जानु? बरु गेस्टहाउसमा अलि बढी पैसा तिर्‍यो भने भन्याजस्तो केटी पाइन्छ।’ सुर्खेतबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि अर्काे साता कतार उड्न लागेका उनले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘काठमाडौँ, माछापोखरीमा साथीसँग बस्छु। आज एउटीलाई उतैतिर लैजाऊँ भनेको। यो पुलमा त यौ’ ‘नक’र्मीको लस्करै हुन्छ। उनीहरूले भनेको ठाउँमा गयो भने त लुटेर पठाइदिन्छन्।’सुन्धारा जाने बाटोमा भएका दुई आकाशेपुलमा मानिसको भीड अ’त्यधिक थियो। त्रिपुरेश्वरपट्टिको पुलमा फुटपाथ पसलेहरू इयरफोन र मोबाइलका ग्लासजस्ता सामान फिँजाएर बसेका थिए।
महानगरीय प्रहरी वृत्तनजिकैको आकाशेपुलमा चार जना पुरुष गफिँदै उभिइरहेका थिए। उनीहरू सबै २५–३० वर्षका देखिन्थे। पुलमा छिटफुट मानिस हिँडिरहेका थिए। केही समयपछि उनीहरू भएको ठाउँमा दुई युवती देखापरे। उनीहरूमध्ये एकले सर्ट र स्कर्ट लगाएकी थिइन्। अर्की एक जनाले सर्ट–प्यान्ट लगाएकी थिइन्। एकउनीसँग कुराकानी गरिरहँदा अर्का एक जना व्यक्ति पनि आए। उनले एक पटक यौ’ ‘नक’र्मीले आफूलाई लुटेको सुनाए। ‘यही पुलबाट १५ सय रुपैयाँ भनेर एउटीले आफ्नो कोठामा लगेकी थिई,’ उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेपछि भएको ४५ सय रुपैयाँ पनि लुटी।’ उनी राप्ती यातायातका सहचालक रहेछन्। गाडी अघिल्लो दिन काठमाडौँ आइपुगेको र सोही रात फर्किन लागेको बताउँदै उनले भने, ‘जानुअघि आफ्नै कोठामा लगेर यसो रमाइलो गरौँ भनेको कुरै मिलेन।’
माओवादीमा ठुलो भुकम्प फेरि सक्तिसाली युवा नेता एमाले प्रबेश
श्रीमतिको लास काँधमा बोकेर नविन भन्छन्, ‘उनीलाई दुःखमा कहिल्यै साथ दिन सकिन’
मलाई गर्भवती बनाउने लाइ ४ लाख दिन्छु !
राज तन्त्र फर्काउन लाखौ मान्छे तयार छिटो हेर्नुहोस